Tijaabada COVID 'cusub ee' farshaxanka 'ee garoonka John Lennon Airport ee Liverpool
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Tijaabada COVID 'cusub ee' farshaxanka 'ee garoonka John Lennon Airport ee Liverpool
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Gegida Diyaaradaha ee Liverpool John Lennon Airport ayaa hadda siin kara rakaabka diyaaradda xarun casri ah oo tijaabinta COVID ah oo ku taal goobta garoonka madaama ay bilaabaneyso inay dib u bilowdo jadwalka duulimaadkeeda ayna yeelato rakaab badan oo mar kale duula.
Shaybaadh cusub oo PCR ah ayaa laga furay Madaarka Liverpool.
Shaybaarka cusubi wuxuu samayn karaa 500 imtixaan maalintii.
Gegida Diyaaradaha ee Liverpool ayaa ah tii ugu horreysay ee UK yeelato xarun u gaar ah.
Daryeelka caafimaadka iyo shirkadda tijaabada ah ee Salutaris People-oo ka shaqaysa adeegyada tijaabada PCR-ga degdegga ah ee rakaabka diyaaradda ee garoonka John John Lennon Airport, iyada oo lala kaashanayo Test Assurance Group Ltd (TAG (Wada-shaqeeyaha Rasmiga ah ee Covid-19 ee Liverpool John Lennon Airport)) shaybaar cusub oo COVID lagu baaro oo ku yaal Garoonka John Lennon ee Liverpool.
Xarunta ugu casrisan waxay iskaashi la leedahay Source BioScience-oo ah hormuudka bixiyaha caalamiga ah ee adeegyada shaybaarka ee macaamiisha warshadaha dawooyinka, daryeelka caafimaadka, kiliinikada, cilmi baarista nolosha iyo warshadaha biopharma-iyo Dadka Salutaris oo shuraako la ah Kooxda Hubinta Imtixaanka Ltd (TAG) waxay ku siinayaan tijaabada COVID iyo PCR madaarka Liverpool John Lennon.
Shaybaarka cusub ayaa loogu talagalay inuu sameeyo 500 oo tijaabo ah maalintii laakiin si fudud baa loo kordhin karaa si loo fududeeyo 1000 imtixaan iyo wixii ka dambeeya haddii loo baahdo. Isha BioScience waxaa loo aqoonsaday ISO 15189: 2012 heerarka sidoo kale waa DHSC liis-bixiyaha bixisa baaritaanka COVID-19.
Adeegga ay bixiyeen TAG, Dadka Salutaris, iyo Source BioScience waxay u saamaxaysaa rakaabka diyaaradda ee Liverpool John Lennon Airport iyo kuwa ka duulaya kuwa kale Madaarada UK oo leh adeegga tijaabada Rapid Fit to Fly oo leh waqtiga wareejinta ee 3 saacadood, oo ay weheliso Adeegga tijaabada Fit 24 saac ee Fit. Muunado ayaa sidoo kale lagu ururiyaa goobta Liverpool waxaana lagu baaraa shaybaarka ugu weyn Source Bioscience ee Nottingham oo awood u siinaya Maalinta 2, Maalinta 8, Tijaabada Siideynta iyo adeegga baaritaanka PCR COVID ee macaamiisha.
Ka faalloonaya xarumaha cusub ee Madaarka Liverpool John Lennon, Agaasimaha Ganacsiga Lucy O'Shaughnessy, ayaa tiri:
“Waxaan ku faraxsannahay inaan noqonno garoonkii ugu horreeyay ee UK ee yeelanaya xarun iyo adeeg u gaar ah. Gegida Diyaaradaha ee Liverpool John Lennon Airport ayaa hadda siin kara rakaabkayaga diyaaradda ee qiimaha leh xarun tijaabo COVID oo casri ah oo ku taal goobta halkaan gegida diyaaradaha markii aan bilowno inaan dib u bilowno jadwalkayaga duulimaadka oo aan helno rakaab badan oo mar kale duula. Gegida dayuuradaha ayaa had iyo jeer ku dadaala inay siiyaan macaamiishayada adeegga ugu wanaagsan ee suurtogalka ah mar walba. La shaqaynta wada shaqaynta Kooxda Hubinta Tijaabada (TAG) / Dadka Salutaris iyo Source BioScience waxay noo saamaxaysaa inaan bixinno adeeg tijaabo PCR ku habboon oo hufan oo ay ka shaqeeyaan bixiyeyaasha daryeel caafimaad oo lagu kalsoon yahay. ”
Xarunta cusub- oo ah tan kaliya ee nooceeda ah ee gegida diyaaradaha ee UK- waxaa ka shaqeeya afar shaqaale tiknoolajiyadeed oo shaybaarro ah oo ay ku jiraan kormeere wareejin waxayna leedahay 8 falanqeeye PCR goobta, kalkaaliyaha dareeraha Bio Molecular Systems iyo baaskiil kuleylka si ay u siiyaan deg deg deg ah- waqtiga PCR-ga tayada leh ee lagu ogaanayo SARS-CoV-2.
Dalxiiska Guriga Oo Sii Socda Dib U Soo Laabashada Halka ...
Tilmaamaha Dalxiiska ee Ugandha oo Dib Uceliyay Inkastoo COVID-19 Dib udhac Yimid